Sportsnet သည် Orad TD Control သို့ပြောင်းလဲသွားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Sportsnet Orad TD ထိန်းချုပ်ရေးမှနှစ်မြောက်မွေးနေ့
Sportsnet Orad TD ထိန်းချုပ်ရေးမှနှစ်မြောက်မွေးနေ့
အောက်တိုဘာလ 30, 2014 - Sportsnetယင်းအကြောင်း NHL ၏, ထိုသီးသန့်ကနေဒါအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့်, အသုံးပြုနေသည် Orad TD ထိန်းချုပ်ရေး ယင်း၏အသစ်များကို State-Of-The-Art များအတွက်စတူဒီယိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲရန် "ဟော်ကီဗဟိုစတူဒီယို။ " ဒီသဲတည်ဆောက်ထွက်ဂိမ်းဗီဒီယိုများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပြသသည့် LED ကြမ်းပြင်အပါအဝင်အကြောင်းအရာ Display ကိုမျက်နှာပြင်များတဲ့များပြားလှနှင့်အတူအဓိကဇာတ်စင် features ဧရာ 3.3m 11.6m အစွန်းရောက် high-resolution မော်နီတာ x ။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းကိုလည်းတစ်ဦးအပြန်အလှန် "Puck အမှတ်တရ။ " ပါဝင်သည်အဆိုပါအနာဂတ်ဒီဇိုင်း 30 puck အရွယ် slot နှစ်ခုစီအကြောင်း NHL အဖွဲ့ဘို့တပါရှိပါတယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ puck ကဒ်အထိုင်ထဲတွင်နေရာသောအခါ, တကကြီးမားတဲ့ touchscreen က Monitor ပေါ်မှာကြောင်းအဖွဲ့၏စာရင်းဇယားအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Orad ရဲ့ TD ထိန်းချုပ်ရေးတဦးတည်းလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုဖြေရှင်းချက်သို့ရှုပ်ထွေးဂရပ်ဖစ်နဲ့ content Workflows လွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုအပ်သည်အရင်းအမြစ်များပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ထိုအခြင်းနှင့်စတူဒီယို၏အခွား Non-စံ Display ကိုမျက်နှာပြင်များမှအကြောင်းအရာ၏ဖြန့်ဖြူးရိုးရှင်းစွာ။
Orad Professional ကန်ဆောင်မှုများကနေဒါ System Integration နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ အသုံးချအီလက်ထရောနစ် ပြုဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းစတူဒီယိုဒီဇိုင်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ဂျက် Morton PDG"သူ့ရဲ့မြင့်မားလူကြိုက်များပြပွဲအပေါ်ဂိမ်းထုတ်လွှင့်ဖို့ Sportsnet အသစ်နှင့်အမြင်အာရုံစိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းများပေးခြင်းကနေဒါ Sportsnet ဟော်ကီည။ "
"Orad မှာအသင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းများအောင်အတွက်အသိပညာနှင့်ဆန်းသစ်သောထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့စည်းစိမ်ကိုဆောင်တတ်၏, ငါတို့သည်သူတို့အထဲ၌ထည့်သွင်းသည့်ဖန်သားပြင်ဘဝထံသို့လာကြ၏။ ကျနော်တို့အားကစားနှင့်သတင်းထုတ်လွှင့်အတွက်နေရာအပိုင်းအခြားတွန်းအဖြစ်ဤ ", အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ Sportsnet '' အသစ်ကဟော်ကီအစုံနှင့်အတူဤနေရာတွင်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုအတူဒါဒါသော့ချက် အန်ဒ Durette, SVP, အကြီးတန်းဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာဂျက် Morton PDG ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုဗီဒီယိုမြို့ရိုးကိုအပြောင်းအလဲနဲ့, Real-time 4D ဂရပ်ဖစ်မျိုးစုံကဗီဒီယို server ကိုလမ်းကြောင်းများနှင့်နေဆဲစတိုးဆိုင်ကြီးသားအပေါင်းတို့, တဦးတည်း box ထဲမှာများကို Orad ရဲ့ HDVG3 က high-performance ကိုဆပ်အင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ Orad ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက် software ကို TD ထိန်းချုပ်ရေးလွယ်ကူသော-to-operate ဖြေရှင်းချက်သို့စနစ်ပေါင်းစပ်။ TD ထိန်းချုပ်ရေးအလွန်စတူဒီယိုရဲ့အများအပြားကဗီဒီယိုနံရံများနှင့်အပြန်အလှန်နေရာများများအတွက် Pre-ထုတ်လုပ်မှု, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကို simplifying စဉ်အသက်ရှင်သောဒေတာများပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူ Real-time 3D animations တွေကို & ဂရပ်ဖစ်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ Sportsnet ခွင့်ပြုပါတယ်။
အသုံးချအီလက်ထရောနစ် Orad TD ထိန်းချုပ်ရေးအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုစတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်း, နိုင်ခဲ့သည်။ "ဒီပူးတွဲအသုံးချအီလက်ထရောနစ်-Orad အဖွဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသမိုင်းအောင်မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းလုံးဝဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုရုပ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်အပ်နှင်းခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြင်းအား၏တစ်ဦးကဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းတပ်ဆင်ခဒါအောင်မြင်သောခဲ့သည်"ပတေရုသ Gillespie, အသုံးချအီလက်ထရောနစ်မှာထုတ်လွှင့်စနစ်များအဖွဲ့မန်နေဂျာကဖော်ပြသည်။ "အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာပိုကောင်းအောင် Orad နှငျ့အလုပျလုပျတဲ့ချောမွေ့စွာဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ TD ထိန်းချုပ်ရေးအမှန်တကယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ, အဆင်ပြေစေရန်နှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Sportsnet ကျေးဇူးပြုတတ်၏။ "
"ဒါဟာကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်အဘို့အကာဂုဏ်အသရေဖြစ်ခဲ့သည်" ဘရိုင်ယန်ကယ်လီ, အထွေထွေမန်နေဂျာ, မြောက်အမေရိက, Orad ကပြောပါတယ်။ "ဒီစတူဒီယိုထဲမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏အဆင့်နှင့်နည်းပညာအားဖြင့်ဖွင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြ options များအမှန်တကယ်မကြုံစဖူးပါ။ "
ဤစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.sportsnet.ca/hockey/nhl/rogers-sportsnet-unveils-new-nhl-hockey-night-in-canada-cbc-studio-10-things-to-know.
3D အသံလွှင်း ကနေဒါထုတ်လွှင့် အကြောင်းအရာ အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး ဂရပ်ဖစ် အကြောင်း NHL ORAD Pre-ထုတ်လုပ်မှု အားကစားထုတ်လွှင့် အားကစားထုတ်လုပ်မှု SportsNet 2014-10-30
ယခင်: BrandMaster ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုချဲ့ထွင်ဖို့ UTV အိုင်ယာလန် - pixel ပါဝါအိုင်ယာလန်များအတွက်ချန်နယ်သစ်အမှတ်တံဆိပ်
နောက်တစ်ခု: SIM ကဒ် Group မှတည်ထောင်သူရော့ Sim DGC ရဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘဝကအသင်းဝင် Award ဆုနှင့်အတူတင်ပြ